Qeybaha Tababarka iyo Daraasaadka
En Samaynta iyo daraasadaha Waxaan la macaamileynaa mowduucyo aad u tiro badan oo laxiriira waxbarashada ujeedkuna wuxuu ahaa inaan kaa caawino howshaada tababarka si aad u hesho waddo looga baxo adduunka shaqada. Hoos waxaad kaheleysaa dhamaan qodobadii aan sameynay waqtigaan oo dhan oo aan lajirnay degelkan. Waxaan haynaa qayb ku saabsan imtixaanada tartanka, oo aad ka heli doonto macluumaadka ugu faahfaahsan uguna cusboonaysiinta tiro badan oo laamo kala duwan ah.
Waxaan sidoo kale leenahay qaybta wararka, oo ay ku jiraan tartammadii ugu dambeeyay iyo dhacdooyinka xiisaha kuu yeelan kara, iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee tababarka, oo ay qoreen cajaa'ibdeena cajiibka ah kooxda tifaftirka. Haddii aad raadineyso wax qaas ah oo aadan halkaan ka heli karin, waad isticmaali kartaa mashiinka raadinta.
Mudnaanta iyo aqoonsiga
Maamulka iskiis u taagan
Xoogagga amniga ee dawladda ayaa mucaarad ah
Mucaaradka Golaha Gobollada
Mucaaradka Ilaalada shacabka
Mucaaradka Shaqaalaha Adeegyada
Mucaaradka Booliska Deegaanka
Mucaaradka Booliska Qaranka
Kulamada ardayda iyo jaaliyadaha
Kheyraadka iyo tababarka